Otu esi eme otu ọdịnaya niile nke ekwentị gị (Android + iOS) - Móvil Forum | Nzukọ Ekwentị
Otu esi eme otu ihe edere na ekwentị gị
Ụlọ Ignatius | | android, Sistemụ arụmọrụ
Ebe ọ bụ na ịgbakọ bidoro na-ewu ewu n'etiti 90s, anyị enwetawo ọrụ metụtara ya nke anyị na-amaghị banyere: backups. Ndabere bụ naanị usoro iji zere ịlafu ozi niile na anyị echekwala ma na kọmputa, dịka na mbadamba nkume ma ọ bụ smartphone.
Ọrụ nchekwa igwe ojii enyerela ọtụtụ aka na ọrụ a, ọrụ nke chọrọ na mbụ ijikọ draịvụ ike mpụga na kọmputa iji mee nkwado ndabere. Na smartphones nke a agaghị ekwe omume, yabụ anyị ga-aghọrọ ụzọ ndị ọzọ mepụta otu ọdịnaya niile dị na ekwentị gị.
N'agbanyeghị mgbalị dị iche iche Microsoft mere iji banye n'ụwa nke smartphones, ọ dị nwute na ọmarịcha echiche (anaghị m ekwu ya na mania) inye Windows na ekwentị adịghị ihe ịga nke ọma, na-amanye ya ịhapụ echiche ahụ kpamkpam na ma iOS na gam akporo na-aga n'ihu na-ekere òkè n'ahịa ahụ.
Otu esi eme nkwado na Windows 10
Site na ịwepụta usoro okike zuru oke nke ngwaọrụ, Apple na-enye anyị ngwaọrụ dị iche iche iji mepụta akwụkwọ nkwado n'ụzọ dị mfe na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod touch. N'ihe banyere gam akporo, ihe ahụ dị iche, ọ bụ ezie na ọ dabere na gam akporo, ọ bụ Google n'onwe ya onye na-ahụ maka ịkwado ohere nke ịme mbipụta nke ọdịnaya nke ngwaọrụ ahụ, ọ bụrụhaala na ngwaọrụ Google na-achịkwa ngwaọrụ ahụ.
Site na mmachibido iwu US na Huawei, a manyere Google ikwe ka gam akporo nye ya na ngwaọrụ ya, yabụ usoro anyị ga - egosi gị ịme ederede na Google's Android (yana ọrụ Google) abaghị uru maka ngwaọrụ Huawei enweghị ọrụ ndị a.
1 Ihe kpatara nkwado ndabere
2 Ndabere na gam akporo
2.1 Google Drive maka data
2.2 Foto Google maka foto na vidiyo
3 Ndabere na iOS
Ihe kpatara nkwado ndabere
Weghachi ekwentị n'ihi na ọ naghị arụ ọrụ dị ka ụbọchị mbụ, anyị nwere nnukwu oriri batrị ma anyị achọpụtaghị ihe ngwọta, ezuru ekwentị ma ọ bụ furu efu, ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ kpamkpam ... enwere ọtụtụ ọnọdụ aghara nke anyị nwere ike izute na ụbọchị nke na-akwado oge dị mkpa mee nkwado ndabere.
Ndabere na gam akporo
Google Drive maka data
Iji nwee ike iji gam akporo ekwentị, ọ dị mkpa, ee ma ọ bụ ee, inwe akaụntụ Gmail. Ihe ndekọ Gmail abụghị naanị na-enye anyị ọrụ ozi kacha mma dị taa, kamakwa na-enye anyị usoro ọrụ metụtara yana Google Photos, Google Drive, iji kpọọ ndị kacha mara amara na ọtụtụ anyị nwere ike nweta ọtụtụ n’ime ha.
Ndabere na anyị nwere ike ime natively site gam akporo na Google Drive na-agụnye oku na-aga akụkọ ihe mere eme, kọntaktị, ozi ederede ma ọ bụghị foto na vidiyo ebe ọ bụ na nke ahụ bụ foto Google na-elekọta. Iji mee nkwado nke gam akporo ekwentị na Google Drive, anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịnweta ntọala njedebe site na ngwa ahụ Ntọala.
N'ime Ntọala pịa Google iji nweta ọrụ ndị ọrụ ọchụchọ ahụ na-enye na otu n'ime ha bụ ịme akwụkwọ ndabere na Google Drive.
N'ime nchịkọta nhọrọ Google, pịa Ndabere ndabere.
Ọ bụrụ na anyị nwere ihe karịrị otu akaụntụ na ngwaọrụ ahụ, anyị ga- họrọ nnabata nke anyi choro ime oyiri.
N'ikpeazụ anyị pịa Mepụta ndabere ugbu a.
Site na itinyeghị onyonyo na vidiyo echekwara na ngwaọrụ ahụ, usoro a na - ewe obere sekọnd, nkeji na nke kachasị njọ, yabụ na ọ dịghị mkpa iji kwụọ ngwaọrụ ahụ mgbe anyị na-eme nkwado ndabere.
Ọ dịghị mkpa iji tinye ngwa Google Drive na kọmputa,, ebe ọ bụ na anyị agaghị enwe ike ịnweta data nkwado ndabere, ebe ndị a ezoro ezo ma na-enweghị ohere site na akaụntụ anyị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata Google Drive na kọmputa gị iji nweta faịlụ ndị anyị debeere na igwe ojii Google ị nwere ike ime ya na ngwa ị nwere ike ibudata site na njikọ na-esote.
Foto Google maka foto na vidiyo
Imirikiti ndị ọrụ ekwentị na-eche naanị foto na vidiyo ha na-ewere kwa ụbọchị, ebe ha na-anọchite anya ncheta bara uru maka ọdịnihu. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe gị na naanị ihe na-echegbu gị bụ ụdị ọdịnaya a, ịkwesighi iji Google Drive mee otu kọmpụta gị, ebe ọ bụ site na iji Google Foto ị nwere ike ime ya.
Foto Google na-echekwa foto na vidiyo niile anyị wepụtara na ngwaọrụ anyị nwere oke mma (ọ bụghị otu ụdị dị ka onyonyo ma ọ bụ vidiyo nke ngwaọrụ anyị mana ọ yitere ya) kpamkpam free na akpaka. Oge ọ bụla anyị jikọtara ngwaọrụ anyị na chaja, ngwa ahụ dị maka ibugo ọdịnaya ọhụrụ niile na foto Google.
N'ihi ngwa a, anyị nwere ike nweta ọdịnaya niile kere na ngwaọrụ anyị na ngwaọrụ ọ bụla na kọmputa site na ihe nchọgharị ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-adabeghị na ọrụ nchekwa igwe ojii, ị kwesịrị ime ya ugbu a. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ka e nwere ụzọ ọzọ na nkwado ndabere na mpaghara nke ngwaọrụ gam akporo gị, ma ọ dịkarịa ala nke ihe oyiyi na foto, nke bụ ihe dị mkpa n'ezie.
para ndabere gam akporo na WindowsAnyị ga-emerịrị ihe ndị m kwuru n'okpuru ebe a:
Jikọọ smartphone na PC site na ịrụ ọrụ ahụ Nnyefe faịlụ na ngwaọrụ.
Ọzọ, anyị nweta Windows File Explorer ma nweta ya nchekwa unit na-anọchite anya ekwentị ọhụrụ.
N'ime nchekwa niile egosipụtara, anyị kwesịrị mee nnomi nke folda DCIM. A na-echekwa onyonyo na vidiyo niile anyị ji akụrụngwa arụ na folda a.
Usoro iji mee nkwado ndabere nke ihe oyiyi na foto anyị nwere na ama gam akporo site na Mac bụ otu ihe ahụ na Windows, ebe ọ bụ naanị na anyị ga - edetuo folda DCIM nke ngwaọrụ ahụ. Iji nweta ngwaọrụ, anyị ga-eji ngwa ahụ Nyefee faịlụ gam akporo, ngwa nke abụghị naanị ihe nchọgharị faịlụ yiri Windows.
Ndabere na iOS
Sistemụ arụmọrụ nke Apple na-eji na ngwaọrụ mkpanaka ya bụ iOS, sistemụ arụmọrụ dị iche na nke anyị nwere ike ịchọta na gam akporo, yabụ ụzọ maka ndabere ha dị nnọọ iche.
iCloud bụ Apple ojii nchekwa ọrụ. Ọrụ a na-enye ndị ọrụ niile 5 GB nchekwa n'efu, karịa ohere zuru ezu iji chekwaa data kachasị mkpa nke ngwaọrụ anyị (iPhone, iPad ma ọ bụ iPod touch) mana ghara ịchekwa onyonyo na vidiyo anyị nwere na ngwaọrụ.
A na-arụ ọrụ na ndabara na ndabara, yabụ anyị ga-enwe nkwado ndabere na igwe ojii Apple nke kọntaktị anyị, kalenda, ibe edokọbara Safari, ndetu, ncheta, ozi iCloud, okwuntughe, data sitere na ngwa Ahụike ... Ọ na-echekwa foto na vidiyo na anyị na-eme site na ngwaọrụ anyị, ọ bụrụhaala na anyị nwere ohere karịrị 5 GB nke ọ na-enye n'efu.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-deactivate na Photos na iCloud igbeOzugbo 5GB zuru ezu, ọ gaghị enwe ohere ịchekwa ọdịnaya ọhụrụ. Site na ngwaọrụ ya n'onwe anyị nwere ike ịme akwụkwọ ndabere nke iPhone anyị. Nke a data adịghị agụnye data na-echekwara na Apple ígwé ojii naanị maka rụọ ọrụ a, ma naanị na-agụnye:
Ndabere nke Apple Watch ọ bụrụ na ọ bụghị Shakekọrịta Ezinụlọ.
Ihuenyo mbu na nhazi nke ngwa (ọ bụghị ngwa ahụ n'onwe ha).
Kedu ihe ọ bụ agunyeghi na iCloud backups:
Ihe echekwara na iCloud dika kọntaktị, kalenda, ndetu, ozi, data sitere na ngwa Ahụike ...
Data echekwara na ọrụ igwe ojii ndị ọzọ dị ka Gmail
Ozi ngwa ntinye ederede.
Apple Lezienụ ozi na ntọala.
Touch ID na ntọala NJ ID.
ICloud Music Library na App Store ma ọ bụrụ na ọ ka dị na iTunes, Apple Books, ma ọ bụ Storelọ Ahịa.
para enyere iCloud backups Anyị ga-agbaso usoro nke m kọwara n'okpuru:
N'ime Ntọala, pịa Apple ID anyị.
Na-esote, pịa na iCloud.
N'ime iCloud, data niile echekwara na iCloud na akpaghị aka mana nke ahụ anaghị esonye na nkwado ndabere.
Iji rụọ ọrụ ndabere na iCloud, pịa Detuo na iCloud.
N'ikpeazụ, anyị na-arụ ọrụ Ntugharị Detuo na iCloud na n'ime Zaghachi ugbu a.
Ọ bụrụ na ejikwa kọmputa anyị na macOS 10.14 ma ọ bụ tupu, anyị ga-eji ngwa iTunes. iTunes abụrụla ngwa maka ihe ọ bụla Apple mere ka ndị ọrụ nweta ya, ana m asị tinye ya, n'ihi na mwepụta nke macOS 10.15, Apple kewapụrụ ngwa niile ma iTunes kwụsịrị. Ndabere mbipụta anyị na-eme nke ngwaọrụ anyị na Mac ha na-agụnye nke ọ bụla n’ime ihe ndị ahụ emere na kọmputa.
Ọ bụrụ na otu anyị maOS 10.14 Mojave kwadoro ma obu tupu, anyị ga-emerịrị usoro ndị a.
Anyị jikọọ ngwaọrụ anyị na kọmputa wee mepee iTunes.
Ozi ga-egosipụta Trusttụkwasị obi a na kọmputa? na ngwaọrụ, site na ịza Ee, ngwaọrụ abụọ a ga - enwe ike ikwurita ozi.
Wee pịa na njikọ ngwaọrụ na General Ozi.
Na akụkụ aka nri ala, anyị ga-pịa Zaghachi ugbu a. Ọ bụrụ na oghere nwere na ngwaọrụ nke anyị chọrọ ịme ka oyiri dị oke elu, oge ọ ga-ewe ga-adị ogologo. Ihe dị mma bụ na ebe nkwado ndabere na-ewere ọnọdụ, ngwaọrụ ahụ na-ebokwa ebubo.
Ọ bụrụ na otu anyị jikwaa maOS 10.15 Catalina ma ọ bụ karịa, anyị ga-emerịrị usoro ndị a.
Ozugbo anyị nwere jikọọ iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod gị na kọmputa gị, ozi a tụkwasịrị obi na kọmputa a? na ngwaọrụ, site na ịza Ee, ngwaọrụ abụọ a ga - enwe ike ikwurita ozi.
Mgbe ah anyị na-aga na Finder wee pịa na ngwaọrụ anyị jikọọ.
N’akụkụ aka nri ka a ga-egosipụta ụdị sọftụwia anyị tinyere. Dị n'okpuru, na ngalaba Backups, anyị ga-pịa Zaghachi ugbu a.
Usoro iji kwado ndabere niile echekwara na iPhone, iPad ma ọ bụ iPod touch bụ otu ihe ahụ dị na Mac na macOS 10.14 Mojave ma ọ bụ tupu, ebe ọ bụ naanị eme ya site na iTunes site na ịme usoro ndị a:
Next, pịa na njikọ ngwaọrụ na General Ozi iji nweta nkọwa nke ngwaọrụ.
Na akụkụ aka nri ala, anyị ga-pịa Zaghachi ugbu a. Usoro a ga-ewe karịa ma ọ bụ obere oge dabere na oghere anyị na-eji na ngwaọrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Sistemụ arụmọrụ » Otu esi eme otu ihe edere na ekwentị gị
Uzo ozo di nma na TeamViewer maka ime ihe di anya
Ọtụtụ nsogbu na Safari na otu esi edozi ha